Xalka Laydhka Led ee Xirfadlayaasha ah & Bixiyaha Iftiinka Waddada Led | Iftiinka CHZ
Soo-saareyaasha Xalka Nalalka Laydhka ee Xirfadlayaasha ah - CHZ Iftiin
500W-1200W IP66/lk1010KV SHARCIYEY
Xalka waxqabadka sare ee garoonka / nalka dhismaha
CHZ waxay bixisaa faylal kala duwan oo ah xalal nalalka LED-ka ah oo u adeega dhowr codsiyo iyo deegaan, oo ay ku jiraan xafiisyada ganacsiga, warshadaha, miinooyinka, waddooyinka, naqshadaha, iwm.
Iftiinka dariiqa CHZ-ST20 flat smd nalka wadada oo leh qiimo jaban
Iftiinka wadada CHZ-ST20 flat smd led nalka wadada oo leh qiimo jaban+https://chz-lighting.com
Qalabka laydhka ee horseedka waddo CHZ-ST35 nalalka wadada faa'iido leh
Qalabka laydhka ee wadada CHZ-ST35 nalka wadada faa'iido leh https://www.chz-lighting.com/street-lighting
Qalabka nalalka wadada CHZ-ST15B cob wuxuu horseeday iftiinka wadada
Nalalka wadada CHZ-ST15B cob waxay keentay iftiinka wadada https://www.chz-lighting.com/street-lighting
Nalalka wadada CHZ-ST33 nalalka wadada
Iftiinka dariiqa CHZ-ST33 wuxuu horseeday hagaajinta nalalka wadada+https://chz-lighting.com
Waxaan ka caawineynaa macaamiisha inay doortaan alaabada ugu habboon waxaanan bixinnaa taageerooyin farsamo oo u dhigma ka dib markay fahmaan baahiyahooda guud. Macaamiishu waxay kaliya u baahan yihiin inay na siiyaan qaar ka mid ah macluumaadka injineernimada aasaasiga ah. (U soo qaado nalka wadada tusaale ahaan, macluumaadka macaamiishu u baahan yihiin inay bixiyaan waxaa ka mid ah ballaca wadada, dhererka tiirka, booska tiirka, kala dheeraynta tiirka, celceliska shuruudaha iftiiminta, iwm.) Iyada oo ku saleysan macluumaadka la bixiyay, naqshadeeyayaashayadu waxay markaa isticmaali karaan Dialux simulate saamaynta iftiinka iyo sii macaamiisha fursado naqshadayn badan.
Shanghai CHZ Lighting waxay ku dhaqmeysaa wax soo saarka caadiga ah waxayna fulisaa koontarool tayo leh si loo hubiyo tayada ugu fiican ee nalalka LED-ka, badbaadinta wakhtiga iyo kharashka labada dhinacba iyo keenaya faa'iidooyinka ugu weyn ee macaamiisha.
Shanghai CHZ Lighting Co., Ltd., oo la aasaasay 2010, waa shirkad tignoolajiyadeed sare leh oo ku hawlan cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka, iyo iibinta alaabta iftiinka.
CHZ waxay raacdaa heerka "teknoolajiyada hogaaminta iyo tayada hogaaminta" waxayna dejisay wadajir R&D xarunta Dr. Chen Dahua, borofisar ka ah Waaxda Ilaha Iftiinka Korontada ee Jaamacadda Fudan. Waxaan si joogto ah u horumarinaa alaabooyin cusub waxaanan wadnaa sirdoonka nidaamka iftiinka. Badeecadayada alaabada waxaa ka mid ah nalka gudaha, nalka warshadaha, nalka garoonka, nalka ciyaaraha, nalalka waddooyinka, iyo iftiinka qorraxda. Waxaan ku adkeysaneynaa in aan isticmaalno qaybo tayo sare leh iyo farsamooyinka wax soo saarka ee horumarsan si aan mid kasta oo ka mid ah nalalkayadu uga sarreeyaan kuwa kale.
Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo ku saabsan nalalka LED-yada ama adeegyadayada, fadlan xor u noqo inaad la xiriirto kooxda adeegga macaamiisha.